विमलेन्द्र, प्रकाशमान र शंशाकबीच भेटवार्ता, के कुराकानी भयो ? Nepalpatra विमलेन्द्र, प्रकाशमान र शंशाकबीच भेटवार्ता, के कुराकानी भयो ?
विमलेन्द्र, प्रकाशमान र शंशाकबीच भेट, के कुराकानी भयो ?
काठमाडौं । सोमबार दिउँसो कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच ‘लञ्च मिटिङ’ भएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापतिका आकांक्षी निधि, कोइराला र सिंहले भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन् ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका पक्षमा लबिङ गर्दै आएका उपसभापति निधिले आफ्नो वैवाहिक वर्षगाठको अवसर पारेर नेताहरुलाई निवासमै बोलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि निम्तो दिइएको थियो । तर देउवा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफलमा रहेकाले आउन ढिलो भएको बताइएको छ ।
काँग्रेसका तीन शीर्ष नेताहरु भेटमा पाँचवटा विषयमा छलफल भएको छ । देशभर कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सिन्धुपाल्चोक लगायत देशभरको आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र गासबासका लागि सरकार समक्ष पहल गर्ने, पार्टीको १४ औं महाधिवेशन र त्यसमा आफ्ना उम्मेदवारीको विषयमा छलफल भएको निधिनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।